ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့် နှင်းဆီပွင့် ပုံဖော်နည်း | Wutyee Food House
၁။ အရင်ဆုံး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံးကို ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း အောက်နားက အရင်စလှီးပါ။
၂။ ပြီနောက် ခရမ်းချဉ်သီး ပတ်ပတ်လည်ကို ဓားဖြင့် ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညီညီညာညာ ဆုံးသည်အထိ လှီးပေးပါ။
၃။ ပြီနောက် ခရမ်းချဉ်သီးအခွံများကို ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း လိမ့်သွားပေးပါ။
၄။ ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့် နှင်းဆီပွင့် ပုံဖော်လို့ ပြီပါပြီ… 🙂
Category: ပုံဖော် အလှဆင်နည်း |
Su Thet Oo says:
Oh,it isav easy.
I think it is v difficult.
Yeah it is easy and nice one. 🙂
khin gyi dwe says:
THANK YOU WUTYEE
Esther Zamboih says:
It is beautiful….
It’s beautiful.Thanks alot sister.
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ကြည့်ပါနော်.. လုပ်ရလွယ်ပါတယ်
ပညာတစ်ခု ထပ်တိုးသွားပြန်ပြီပေါ့ ကျေးဇူးနော်
So cute rose. Thank 🙂
အရမ်းခက်တယ်တယ်လို့ ဆိုင်မှာမြင်တုံးက ထင်ခဲ့တာ။ အရမ်းလက်တွေ့ကျပြီး လွယ်ကူတာမို့ ကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်။ တူမက ဦးသိပ်ကြိုက်တဲ့ Martin Yan လို Chef ဘဲ။ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေလဲ စံမီပါတယ်။ တူမကြီးထုတ်တဲ့စာအုပ်ကို တူးဒေး၊ စာပေလောက၊ City mark ကစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ရှာတာ မတွေ့ဘူး၊ ဘယ်မှာ ရနိုင်လဲ။
မန္တလေးက ဆိုရင်တော့ ရာပြည့်မန္တလေးမှာ ရနိုင်ပါသ
ည်။ တစ်အုပ်မှ၄၀၀၀ ဒီနေ့ပဲ ဝယ်ခဲ့တယ်။
ခုလို အားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ။ bro 🙂
၀တ်ရည် ဟင်းချက်စာအုပ်ကို Ocean နဲ့ စာပေလောကမှာတော့ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ခုလို အားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်.. 😀
Daw Than Nu says:
ဟုတ် လုပ်ကြည့်ပါနော်.. 🙂
အရမ်းလှတယ်နော် ၊ သစ်သီးတွေနဲ့ပုံဖော်တာအရမ်းလဲစိတ်ဝင်စားတယ် ၊အခုလို ရှယ်ပေးတဲ့အတွက်
အမ လဲ email subscription လုပ်တာ မရဘူးနဲ့တူတယ်နော်
အမ မေလ်ထဲကို ဟင်းချက်နည်းတွေမရောက်လာလို့ပါ
ညီမလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ဟင်းတွေလဲ အများကြီးဒီထက်မက သင်ပြပေးနိုင်ပါစေ။
ဟုတ်။ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.. 🙂
aie wenn mon says:
It is easy one!
daw khin thandar lin says:
htay htay maw says:
So easy, tksalot.
တခြားသစ်သီးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး မ…..အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတရ်….
ma, thanks yu par.
Welcome par 😀
thanksalot sis… i want to know long time..
khaing phyu says:
အဲလိုအသီး ပုံဖော်နည်းလေးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင်များများတင်ပေးပါနော် အရမ်းလုပ်တက်ချင်တာ အဲလို အသီးပုံဖော် သင်တန်းတက်ဖို့ ကျတော့မအားလို့ပါ မျှော်လင့်နေမယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. 😀
ok I will sis..
ဟင်းချက်နည်းတွေအ၇မ်းစိတ်ဝင်စားတယ် နောက်လဲ အမြဲဖတ်ပြီး အားပေးနေတယ်နော် အစ်မ…..